Dior By Heart Wedding Studio | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Dior By Heart Wedding Studio | Bahan
Dior By Heart Wedding Studio သည် မင်္ဂလာပွဲနှင့်ပတ်သတ်သော ၀န်ဆောင်မှု့ များကို အစ/အဆုံး ဆောင်ရွက်ပေးသော ဆိုင်ဖြစ်ပါသည်။ Indoor & Outdoor pre wedding packages များကိုလည်း ရိုက်ကူးနိုင်ပါသည်။ Packages များစွာ ရှိသည့်အတွက် မိမိ Budget နှင့် ကိုက်ညီသော ၀န်ဆောင်မှု့ များကို ရယူနိုင်ပါသည်။ Outdoor packages များကို တော့ မြန်မာပြည်တွင်း နှင့် စကာင်္ပူ၊ ဘန်ကောက် အစရှိသော နိုင်ငံခြား ခရီးစဉ် packages များကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးပါသည်။
ဒါ့အပြင် မြန်မာ့ ရိုးရာထိုင်မသိမ်း ၀တ်စုံများနှင့် အနောက်တိုင်း မင်္ဂလာဝတ်စုံများကိုလည်း ငှား/ရောင်း ၀န်ဆောင်မှု့ ပေးပါသည်။ ဈေးနှုန်းသင့်တင့်ပြီး မင်္ဂလာပွဲနှင့်ပတ်သတ်သော ၀န်ဆောင်မှု့ အားလုံးကို တစ်နေရာထဲတွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဆိုင်ရဲ့ အသေးစိတ် အချက်လက်များကို သိရှိလို့ပါက အောက်ပါ ဖုန်းနံပါတ် နှင့် ဖေ့ဘွတ်ပေ့ သို့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
No.5, U Chit Maung Street, Bahan Township, Yangon
အနီးအနား Lung Sone Bus Stop မှတ်တိုင် 1 မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Dior By Heart serves one stop wedding services and there are variety of pre wedding packages including indoor and outdoor. You can choose the packages depends on your budgets. Outdoor wedding package is for both in Myanmar and other country like Singapore, Bangkok etc., Then, they serves traditional and western bridal dress sale and rental services. The price is reasonable and you can get the whole services of wedding in one place. If you would like see more details, you can contact as below phone number and Dior By Heart Facebook page.
Singapore Pre Wedding Package
Shwe Tone Dayi Beauty Salon
Thiri Shwe Sin Beauty Spa ( Sayarsan Branch2)